Ny Vady Atolotra Sy Ny Anjara Toeran’ny Raiamandreny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2017 16:39 GMT
Lahatsoratra masiaka iray nataonà tovovavy safiotra Bangla-Kanadiàna manta vava:
Eny, io no loza mahatsiravina ho an'ireo fanambadiana amboarina marobe rehefa naraiketin'ireo raiamandreny aziatika atsimo tsy ampiheverana. Rehefa mitady vady ho an'ny zanany ny raiamandreny, matetika hitrikitrihany ireo fitsipika fototra toy ny finoana, foko naviana, toebola, eny fa hatramin'ny tonom-bintana aza. Ny tsy fananana toetra mahasarika eo amin'ireo izay ho mpivady na koa karazana fifanakalozankevitra sasantsasany sy fifankahazoana an-tsaina mialohan'ny fanapahankevitra hivady, dia tena mampihorohoro ho an'ny olona iray nianatra sy manan-tsaina. Ary matetika izy ireo no tafalatsaka anaty fifandraisana tsy mampahazo aina izay tsy nonofinofisin'izy ireo akory. Mino aho fa mamaky ity hafatry ny zanany vavy ity i Ramatoa Reny.